Fanohanana an-dRavalomanana : Mijoro ireo Injeniera -
AccueilRaharaham-pirenenaFanohanana an-dRavalomanana : Mijoro ireo Injeniera
Fanohanana an-dRavalomanana : Mijoro ireo Injeniera
15/12/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Sehatra iray mampandroso haingana an’i Madagasikara ny fambolena sy ny fanohanana ireo tantsaha mpamokatra, ary manana traikefa amin’ izany i Marc Ravalomanana. Tsy nisalasala noho izany ireo Injeniera malagasy misahana ny fambolena sy fiompiana, nilaza ampahi-be maso ny fanohanany an’i Marc Ravalomanana. Mifandraika betsaka amin’ ny fampivorana ny tontolo ambany vohitra ny “Manifesto” hoy izy ireo
Nivondrona ireo injeniera manam-pahaizana amin’ny fambolena sy fiompiana miisa hatrany amin’ ny 1 500, ary nanambara ny fanohanany an’i Marc Ravalomanana. Ny anton’ny fanohanana dia noho izy ireo miara-miasa akaiky amin’ ny tantsaha, ary ny programan’i Marc Ravalomanana ihany no mifandraika betsaka amin’ ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena hoy ireo injeniera ireo. Isan’izany ny fanamboaran-dalana sy ny fotodrafitrasa amin’ ny fanatsarana ny tontolon’ny fambolena, ka ahafahana mampandroso haingana. Ohatra nentin’ireo Injeriera manam-pahaizana amin’ny fambolena sy fiompiana ireto ny mahakasika ny olan’ny vary, satria amin’izy ireo dia tsy tokony hanafatra vary hatrany amin’ny 5 hetsy taonina fa tokony hanondrana. Hitan’ ireto injeniera ireto fa Marc Ravalomanana ihany no tsapan’izy ireo fa mahafehy ny teknika fambolena sy ahatongavana amin’izay fanondranana sy fahaleovan-tena ara-bary izay. Raha ny tantsaha sy fanan-tany indray no resahina, dia ny 80% ireo tantsaha dia tsy mamboly amin’ny taniny avokoa.
Ny fanatsarana sy fanavaozana ny lafin’ny fananan-tany ho an’ ny tantsaha anefa, dia tamin’ ny andro nitantanan’i Marc Ravalomanana irery ihany hoy ireo manam-pahaizana amin’ny fambolena sy fiompiana ireo. Nanomboka tamin’ny fanjanahan-tany hatramin’ ny taona 2005, dia 4 hetsy ireo kara-tany nozaraina. Ny taona nitantanan’i Marc Ravalomanana izay naharitra fito taona anefa, dia efa 150 000 ireo kara-tany nozaraina ho an’ ireo tantsaha, raha ny fanazavan’ ireo manam-pahaizana amin’ ny fambolena sy fiompiana ireo no anton’ny fanohanana hatrany.
Ho tapitra anio ny fiomanana mialoha ny fifidianana. Efa tafapetraka avokoa ny lamina rehetra hiatrehana ny androm- pifidianana amin’ny 7 novambra. Manodidina ny 2517 ny mpitandro filaminana hiantoka ny fiambenana ny tananan’Antananarivo tsy hisian’ny fikorontanana. ...Tohiny
Minisitra Henry Rabary-Njaka : Hitarika ny fivorian’ireo minisitra Frankôfônina
Coliséum Antsonjombe : Hizara kits scolaires ny Filoha mivady